'Highglen'-embindini weRutherglen, iyadi ekhuselekileyo
IHighglen likhaya elinomtsalane, elinobuhlobo kusapho kuphela elikwi-500m ukusuka kumbindi wembali yaseRutherglen, eneebhari ezinkulu zewayini, iipubs, iiParker Pies nokunye okuninzi. Zingaphezulu kwe-19 iindawo zewayini zalapha ekhaya, ezininzi zineendawo zokutyela/iikhefi. Kuhambo olufutshane ukuya kuMlambo iMurray kunye neLake Moodemere. I-Corowa, i-Howlong kunye ne-Yarrawonga zineendawo ezintle zegalufa. I-Rutherglen ziiyure ezi-3 zokuqhuba okanye uloliwe ukusuka eMelbourne, malunga ne-35 mins drive ukusuka kwisikhululo seenqwelomoya sase-Albury (iinqwelomoya ezininzi zemihla ngemihla zisuka eSydney okanye eMelb).
Ihlaziywe ngothando ukuze ibuyisele umtsalane wexesha layo kodwa ihlaziywe ngobuntofontofo bale mihla, eli gumbi lokulala le-4 igumbi lokuhlambela eli-3 libonelela ngeyona ndlela yokuphuma (jonga isicwangciso sendlu sokucwangciswa kwebhedi). Ngokufudumeza okuphakathi kunye nokupholisa kunye nomlilo weenkuni, ipatio yangaphandle enebarbeque kunye 'nesibhakabhaka esikhulu' iimbono kwiyadi yangasemva (kubandakanywa 'kwiBhotile yeWayini' kunye namakroti encochoyi yekhephu yeFalls Creek kunye neAustralian Alps ebusika), unako. uphonononge wonke ummandla onokuthi unikeze okanye uphumle nje kwindawo! Ineyadi ebiyelwe ngokukhuselekileyo ngaphambili nangasemva, indawo yokupaka ngaphandle kwesitalato, i-portacot, izitulo eziphakamileyo, igumbi lokuhlambela losapho elinebhafu, itafile yabantwana kunye nezitulo, ingqokelela yezinto zokudlala zabantwana, umgodi wesanti kunye nesitalato esinye, sijonge ukwenza uhambo okanye iholide kunye nabantwana impepho. Nangona kunjalo, indawo ifanelekile kwindawo yokubalekela ezolileyo kwizibini okanye amaqela ngaphandle kwabantwana. Sibonelela ngayo yonke ilinen yokulala, kubandakanywa nelinen yelinen okanye iitawuli zaselwandle ukuba ziyimfuneko. Kukho ikhitshi eligcweleyo elinazo zonke izinto eziqhelekileyo ukuba ufuna ukupheka isaqhwithi! Isidlo sakusasa asibonelelwanga, kodwa iziseko zi (ioli yeoli, i-S&P, iti, ikofu + iplunger, iswekile). Nceda uqaphele, ikhitshi alilungiswanga kodwa lihlaziyiwe. Izixhobo zokuhlambela ziquka ishampu, i-conditioner, iitawuli zokuhlambela. UHighglen une-intanethi ye-NBN. Akukho zilwanyana zasekhaya ezivumelekileyo ngokwesiqhelo, izilwanyana zangaphandle ZININGAvunyelwa xa ziceliwe. Nceda uqaphele ukuba le yipropathi engatshaywayo kwaye samkela kuphela iindwendwe eziqinisekisiweyo ze-ID (ukongeza iziqinisekiso kwiakhawunti yakho, yiya kwiProfayili ku-airbnb.com, cofa i-Trust kunye noQinisekiso, phantsi koFaka uQinisekiso olungakumbi khetha isiqinisekiso oza kusongeza) . Okona kubaluleke kakhulu, siyathemba ukuba uziva wamkelekile kwaye uyonwabele le ndawo ithandekayo njengoko sinjalo kule minyaka!
Qaphela: ubuncinci bokubhukisha ubusuku obu-3 ngoMatshi, ngoJuni kunye neempelaveki ezinde zeNdebe yaseMelbourne. Ukungena kwangethuba kunye nokuphuma kade kunokwenziwa ngamalungiselelo angaphambili.
IRutherglen yidolophu enembali, eyakhiwe kwindawo yegolide kwiminyaka yoo-1860. IHighglen ikufutshane nembali yeNtaba iKarmele Convent kwindawo endala yedolophu. Ngoku idume ngokuba ziindawo ezininzi zewayini, kunye nangokukufuphi kwayo neeAlps zaseOstreliya kunye nemijelo yamanzi engaphakathi elizweni. Ke nokuba kusenziwa iisampulu zewayini zalapha ekhaya, ukutya okumnandi, ukukhwela isikhephe, ukudlala igalufa, ukuqubha okanye ukujonga iindlela zikaloliwe zalapha ngebhayisekile, uqinisekisiwe ukuba unokuninzi ongakuhlola!
Sihlala kuphela i-500 yeemitha kude kwaye sinokuphendula ngokukhawuleza ukuba ufuna uncedo ngayo nantoni na okanye iingcebiso.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Rutherglen